Shirka Godey xisbigaa lagu Minja xaabinayay” Gudomiye Axmed Shide oo shakisan. | ogaden24
Shirka Godey xisbigaa lagu Minja xaabinayay” Gudomiye Axmed Shide oo shakisan.
Gudoomiyaha xisbiga Haya Talada dawlada deegaanka Somaalida ayaa shirkii wadatashiga ee Godey kutilmaamay mid shirqoola oo lagu Minja xaabinayay xisbiga.
Siyaasi kamida siyaasiyiinta kusugan magalada Addis ababa ee ay Gudomiyaha Aragtida siyaasiga ah kamidaysan yihiin xiligan, ayaa Ogaden24 u xaqiijiyay in Gudomiye Axmed Shide iyo Taageerayaashiisu u arkaan shirkaas kana Aaminsan yihiin shirqool siyaasadeed oo Kooxda Mustafe ku Minja xaabinayaan Hogaaminta xisbiga” waa sida uu Hadalka u dhigay masuulkaasi oo diiday inaan magaciisa iyo codkiisa saxaafada u adeegsano.
Waxaa uu sheegay in shirkaasi ahaa mid aan Haba-yaraatee wax dan Ummadeed ah looga Hadlin saacadihii Yaraa ee uu socday, balse u Jeedadii laga lahaa shirkaasi lafuliyay Fiidnimadii Habeenkii Axada oo madaxwayne Mustaf Ergoyinkii Gobolada uu mid walba Gooni ula kulmay, waxaana muhiimada ugu wayn ee kulamadaasi ay ahaayeen in meesha laga saaro Gudomiyaha xisbiga iyo xubnaha ay Aragti wadaaga yihiin.
In kaste oo shirka lagu sheegay shirka wadatashiga xukuumada xisbiga iyo shacabka ayna Joogeen xubno katirsan Hogaaminta xisbiga, ayaa sida muuqata waxaa shirkaasi uu dhaliyay dareen shaki iyo mugdi kujiro oo u dhexeeya Gudomiye Axmed Shide iyo xukuumada madaxwayne Mustafe.
Gudomiye Axmed Shide oo ah shakhsiga ay isugu dhowyihiin Abiy Ahmed ayay kago’an tahay inaan Kursigiisa lagu damaacin Gur iyo Garba, balse dhinaca loolanku kala dhexeeyo ayay iyagana dhankooda ka Go’an tahay in Shide saaxada laga saaro, waxaana lagu kala bixi doonaa shirwaynaha xisbiga oo dhamaadka bishan lagu wado inuu Qabsoomo hadii aan mar kale dib loo dhigin.